विभिन्न विश्लेषण र बजार अवस्था को मूल्यांकन को साझा को बजार मूल्य को आधार मा। यो प्रक्रिया, एउटा कुञ्जी स्थिति स्टक indexes द्वारा आयोजित छ। एक के हो शेयर बजार सूचकांक? यो संख्या गतिशीलता र एक निश्चित समयको लागि स्टक मूल्यहरू, शेयर बजार सूचीकरण सदस्यहरू को स्तर झल्काउँछ। प्रत्येक शेयर बजार यसको स्टक indexes: को सूचकांक डाउ जोन्स (DJI) न्यूयोर्क मा, निक्केई (निक्केई) जापानी मा, DAX (DAX) जर्मनी, आदि औद्योगिक सूचकांक DJI - यस लेखमा हामी उदीयमान सूचकांक को पहिलो देखो हुनेछ।
अमेरिकी डाउ जोन्स सूचकांक शेयर बजार को औद्योगिक घटक मा परिवर्तन ट्रयाक गर्न लेट मे 1896 मा चार्ल्स डाउ द्वारा आविष्कार भएको थियो। सूचकांक मा पहिलो 12 कम्पनीहरु समावेश छ। अहिले यो संख्या 30 पुगेको छ यी कम्पनीहरूले सबै उद्योग प्रवेश परिवहन, ऊर्जा र पानी बाहेक। कम्पनीहरु Charlz Dou आफूलाई को चयन मा लगे, र त्यसपछि उहाँले प्रमुख विश्लेषकहरूले र पत्रिका "वल स्ट्रीट जर्नल" को सम्पादक बनाउन थाले। सूचकांक जस्तै "कोका-कोला", "माइक्रोसफ्ट", "वल्ट डिज्नी", "इंटेल", "म्याकडोनाल्ड गरेको" र अरूलाई रूपमा कम्पनीहरु समावेश छ।
सुरुमा, डाउ जोन्स सूचकांक को सरल प्रणालीबाट गणना थियो: यो आफ्नो कम्पनीहरु को योगफल समावेश साझेदारी को मूल्यहरु को गणित मतलब थियो। क्षण मा, सूचकांक मूल्य फरक विचार छ। सूत्र एकदम सरल छ: आगमन स्टक लागत योगफल पनि सुधार कारक (डाउ भाजक) द्वारा विभाजन गरिएको छ। यो भाजक सूचकांक समावेश कम्पनीहरु को संख्या छ। यो सूत्र धन्यवाद अंकगणित मतलब रूपान्तरित भएको छ। तर यस्तो कम्पनीहरु र विभाजन (साझेदारी को विभाजन) को सूचीमा परिवर्तन रूपमा गर्दा घटनाहरू पछि डाउ भाजक मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव। वर्तमानमा, यसको मूल्य 1 भन्दा कम, DJI को मूल्य अर्थात् ठूलो समावेश साझेदारी योगफल भन्दा छ। को विभक्त परिवर्तनहरू अर्थ तथ्यलाई मा राख्नु कुनै महत्वपूर्ण घटनाहरू मान कुनै प्रभाव थियो, र यो नै रह्यो। यो विभक्त र परिवर्तन को लागि।
1 सजिलो र गणना सजिलो (को विभक्त गणना को आगमन संग एक सानो गाह्रो थियो)।
2. लामो इतिहास। ल - अमेरिकाको शेयर बजार को एक प्रतीक। समय यस्तो व्यापक span यसको गतिशीलता को विश्लेषण अवसर बरु सिद्धान्तकारहरु र चिकित्सकहरु अगाडि अप खुल्छ।
1 डाउ जोन्स सूचकांक को आधारलाइन मूल्य तिनीहरूलाई तुलना बिना साझेदारी को औसत मूल्य देखाउँछ। त्यसैले, यो तुलना लागि आधारमा सेवा थियो र एक विशिष्ट तिथि बाँधिएको थियो जो एक निश्चित मूल्य, को सम्बन्ध मा छलफल हुनुपर्छ।
2. सबैभन्दा महत्वपूर्ण drawback - यो साझा को जोडी मूल्य आफ्नो कम्पनी समावेश, र त्यसपछि कुल योगफल को सुधार कारक (डाउ भाजक) द्वारा विभाजित छ जो यसको गणना, को विधि हो। फलस्वरूप, एक कम्पनी को पूँजीकरण अन्य भन्दा कम छ भने पनि, तर माथि आफ्नो साझेदारी को मूल्य, यो सूचकांक अझ महत्वपूर्ण प्रभाव मा छ।
3. 30 कम्पनीहरु को कुल समावेश, डाउ जोन्स सूचकांक छैन सूचकांक को भूमिका मा धेरै राम्रो, शेयर बजार तमाम गतिविधि प्रतिबिम्बित देखिन्छ। कहिलेकाहीं, DJI संग ठूलो objectivity लागि विश्लेषकहरूले को एस पी 500 प्रयोग गर्नुहोस्।
माछा कसरी तलना गर्न
मास्को मा आँखा क्लिनिकहरु: दर्जा, समीक्षाहरू। मास्कोमा सर्वश्रेष्ठ बच्चाहरूको आँखा क्लिनिक: मूल्याङ्कन
सबै विकल्पहरू उपलब्ध छन्: कसरी Android गर्न Android सम्पर्क प्रतिलिपि गर्न
खाडी Zuun-Hagun Baikal। "Zuun-Hagun" - छात्रावास